प्रेम Bunin र Kuprin कामहरू छ - पृथ्वी र स्वर्गमा प्रेम
प्राचीन ग्रीक दार्शनिकहरू प्रेम दुई प्रकार मा विभाजित। Aphrodite Pandemos पृथ्वी शारीरिक प्रेमको देवी रूपमा काम गरे, Aphrodite शुद्ध, स्वर्गीय प्रेम Ourania-घोषणा गरे। छ, यो दुइटा छ। यसलाई मनन र सौन्दर्य रमाइलो गर्न इच्छा गर्न वृद्धि दिन्छ। प्रेम छ Bunin कामहरू र Kuprin पूर्ण मा भेनस यी गुणहरू झल्काउँछ।
नायक आइए Bunin
साँच्चै पार्थिव उच्च र शुद्ध परम र केहि प्रेम को सपना, तर, शारीरिक, नायक आइए आफैलाई प्रेम दिन र त्यसपछि पछुताउनु Bunin डर। नियम, तिनीहरूले पहिलो चरण बनाउन छैन। तिनीहरूले महिला बेलेम कार्य पर्खिरहेका छन्।
आफ्नो नायक गम्भीर भावना हो? केही हदसम्म, हाँ। मानिसहरू या त आत्महत्या commits वा मात्र सम्झनाहरु बाँच्न भनेर तिनीहरूलाई द्वारा Electrified छन्। र सामान्य नायक मा Bunin बरु दयनीय छाप उत्पादन। तिनीहरूले कुनै साँचो masculinity छ, साहस कमी छ। यो लामो समय सुरु भयो। पनि Chernyshevsky, आफ्नो लेखमा Turgenev गरेको नायक को व्यवहार विश्लेषण "रूसी rendez-Vous मा मान्छे", तिनीहरूले एक "pathetic गुण", तिनीहरूले हटाउनुहोस् रुचि हरेक निर्णायक चरण छ कि निष्कर्षमा गर्न आउँछ, कि, छ उहाँले आफ्नो व्यक्तित्व पूरा विफलता बताइएको छ। तर बालिका र महिला, साथै Turgenev, Bunin सामान्यतया प्रत्यक्ष, छाडा coarseness र दृढ बिना छ। तथापि, Bunin संग सबै थप जटिल छ। आत्मा यो महान बनाउने, शरीरका permeates। भ्रम र गाढा भावना एक क्षेत्र गठन। तर प्रेम एक सानो अब पछिल्लो भने, गद्य र जीवनको triviality यसलाई नष्ट हुनेछ। प्रेम Bunin र Kuprin फरक र वर्ण को काम छ, र गरेर दोस्रो मा प्रेम, धेरै earthy र शारीरिक पहिलो क्लासिक र उदात्त देखि "गुणस्तर", यसको ले-बन्द को enormity बाबजुद।
वर्ण ऐ Kuprina
युरोप मा साँचो प्रेमको परम्परा विवरण यसलाई आवश्यक tragically अन्त्य हुनु पर्छ कि यस्तो थियो। सबैभन्दा विशिष्ट उदाहरण - "रोमियो र जूलियट"। रूस मा, Pushkinskoy Tatyany भएकोले "हाम्रो समय को हिरो" बाट विश्वासको यो परम्परा जारी छ। यो तर बाटो असर सकेन प्रेम ऐ चित्रण Kuprin। पनि तातो, भावुक र मसालेदार स्वाद र aromas को पूर्ण बगैंचामा देखि, बोटहरू संग entwined एक सरल केटी प्रेम र राजाहरूको राजा मृत्यु संग समाप्त हुन्छ। यो कथा छनौट Kuprin मौका हो? म लाग्छ। सबै स्वीकार परम्परा भित्र छन्।
तर आफ्नो नायक, नम्र र selfless को उदात्त भावना रूपमा! Kuprin एक स्तम्भ मा एक महिला आफ्नो वर्ण खुला महान भावना, आफ्नो निष्क्रिय सद्गुण संग विशेष गरी युवा मान्छे को दिल उठ्छ। Bunin र Kuprin कामहरू प्रेम को एक संक्षिप्त विश्लेषण देखि देख्न सकिन्छ रूपमा वाहक अक्सर महसुस कि, गरिब कुनै पनि काम मा लागि जान तयार, र कुनै पनि पुरस्कार को लागि प्रतीक्षा बिना गर्दछ मा विशेषता। रूसी गद्य प्रेम को सबैभन्दा उल्लेखनीय काम एक विचार गर्नुहोस्।
कथा Kuprin "गारनेट Bracelet" धेरै चुपचाप सुरु हुन्छ। सबैलाई खुसी छ र शान्त राजकुमारी वेरा Nikolayevna Shein घरमा छ। मध्यस्थता वातावरण को Rostov घर को reminiscent LN बाक्लो, एउटै हावा मानव अन्तरक्रिया को आराम र न्यानोपन मा गिरा। त्यो उनको जन्मदिन घनिष्ठ मित्रहरू र आफन्तहरूका मा देश भेटे।
त्यो थाह गर्ने एक मानिस देखि garnets एक कंगन को एक उपहार प्राप्त छ, तर सात वर्षको लागि उनको प्रेम गर्ने। यो उपहार उनको छुट्टी overshadows, तर पुरानो बुद्धिमानी सामान्य संग कुरा, यो प्रतिक्रिया, आफ्नो राय मा, त्यहाँ प्रेम हुनुपर्छ जो, प्राप्त - "निःस्वार्थ, कुनै पनि काम प्रतिबद्ध तयार, को यातना जानुहोस्। त्यो मजा सबै छ। " "प्रेम" - सामान्य भन्नुभयो - "। संसारमा सबैभन्दा ठूलो रहस्य" र वेरा Nikolayevna एकल, सबै-क्षमाशील, मर्न तयार रहस्य, स्पर्श गर्न प्रबन्धन। उहाँलाई विदाई भन्न अलि अहानिकारक पहेंलो भाग अधिकारी एक लाश राख्ने बाकस मा झूट, प्रतिबद्ध गर्दा आत्महत्या एक दुःखी दिन, र आफ्नो भ्रमणहरू, वेरा, सबै भन्दा भावशून्य मान्छे मात्र आँसु कारण छैन। एक जवान र सुन्दर समाज महिला Kuprin बारेमा परम्परागत कथा उत्थान र निःस्वार्थ प्रेम बारेमा कविता मा गरियो। बदलामा केहि प्रतीक्षा बिना शुद्ध भावना यो भजन, र त्यहाँ एक कहानी Kuprin "गारनेट Bracelet" छ। र अर्को लेखक आफ्नो काम मा एक पूर्ण बिभिन्न, रहस्यमय प्रेम लागि अब।
Bunin काम मा पीडादायी प्रेम। "स्वच्छ सोमवार" उहाँले आफ्नो सबै भन्दा राम्रो काम छलफल। नायक - एक सबै आफ्नो शारीरिक आकर्षण मान्छे को लागि "सामान्य"। अर्को कुरा - यो हेरोइन। यो अनौठो र अबोध्य कार्य हो, तर आफ्नो महत्त्व प्रकृति को "exclusivity" को प्रकृति छ। यो छोटो कथा घटनाहरूको लगभग devoid छ।
तिनी र तिनको साथी संगीत Chaliapin उपस्थित, जहाँ तिनीहरूले मास्को को सबै भन्दा राम्रो अभिनेता, केही पाठ्यक्रम, लेक्चर, रेस्टुरेन्ट र taverns द्वारा मनोरंजन थिए "skits"। तर त्यो सबै तर्किएको महसुस। यो हेरोइन देख छ हार्ड, त्यो उपग्रह, वीर कुरा, सम्पूर्ण बुझेनन्। त्यो एक भ्रमणमा monasteries छ र धार्मिक प्राचीन आफ्नो आदर्श भेट्टाउनुहुन्छ। यो हेरोइन महिला सौन्दर्य, इच्छा र जीवनको लागि आवेग शक्ति छ। Bunin र Kuprin को कार्यहरूमा त्यसैले धेरै फरक नायक र प्रेम। कार्निवल पछि, नेट सोमवार, यो एक मनपर्ने संग उहाँले विहारको गर्न, आत्मा संसारमा जान्छ गणना छ र यसलाई परित्याग। पछिल्लो समय नायक आफ्नो प्यारो गल्ति, पहिले नै नन को रूप मा हेर्छ, तर यो बलियो तनाव आउँछ। त्यो विहारको आफ्नो उपस्थिति महसुस गरे। चुपचाप गर्यो, नायक छोड्छ।
यसलाई विभिन्न शो छ रूपमा Bunin र Kuprin कामहरू प्रेम को विषयवस्तुहरू, फरक छ। तर एउटा दुःखद घटना रूपमा प्रेम र एक र अर्को लेखक सुरक्षित गरियो। Bunin को विपत्तिजनक अस्तित्व Kuprina मार्फत देखाइएको छ - scrapping मार्फत, यो, जस्तो थियो सबै immutable र दृढ स्थापित। आखिर, पक्कै, यो उनको मानिसको राजकुमारी मृत्यु unrequited प्रेमी परिवर्तन। कथा को अन्त मा त्यो बिस्तारै कुरा अज्ञात र भारी छोएर, उनको द्वारा पारित कि जीवन महसुस गर्न थालेका थिए।
अन्ना Tumanov, "अलेक्जेन्डर" र अन्य कथाहरू
Rudyard Hamilton: जीवनी र काम
"एक दिन Ivana Denisovicha": एक सारांश। "एक दिन Ivana Denisovicha," Solzhenitsyn
क्रिस्टिन हन्नाको: जीवनी, पुस्तकहरू
एव्जेनी YAkovlev मनोवैज्ञानिक: पुस्तकहरु र प्रविधी
Proskurin Petr Lukich: परिवार, जीवनी, रचनात्मकता
"अवतार" मा सुन भाडा: सबै तरिका
Donormil - प्रयोगको लागि निर्देशन
दुर्लभ र असामान्य प्राकृतिक घटना: एक फोटो, को विवरण
के कान मा आगो भने?
ROFL - के संक्षिप्त र कसरी इन्टरनेटमा नवीनतम रुझान सजग हुन गर्दैन?
Seychelles - विदेशी प्रेमीहरूलाई लागि स्वर्ग
प्रसिद्ध अभिनेता, "रिस व्यवस्थापन"
एक साधारण घटना छ सपनामा गीत गाउने? सपना व्याख्या मार्फत ब्राउज!
बच्चा मा एलर्जी rhinitis: व्यवहार कसरी
मुख को कुना मा चर्किएको
युरोप मा gothic महल। gothic वास्तुकला